nmn & nr uzuzu ngwaahịa mma hplc ma 98% | AASraw Ogo
Emepụta ngwaahịa kachasị elu, weta ihe kachasị mma maka ọtụtụ.
AASraw nwere sistemu njikwa njikwa mma maka SOP (Usoro Arụ Ọrụ). Edere ọrụ niile, nwee ike ịbanye, yana nzaghachi / azịza ndị ahịa ma cheta usoro. Njikwa na Ule, nginggbanwe, Imezigharị na ihe egwu bụ usoro okike zuru oke maka imepụta ntụ ntụ. Ruo ọtụtụ afọ, akụrụngwa anyị nwere ezigbo mma 100%, nke na-enyere anyị aka iwulite aha ọma na ụlọ ọrụ a.
N’akụkụ usoro nchịkwa siri ike na SOP, ihe ndị metụtara ya ga-enyere aka na njikwa usoro, nyocha na ngwaahịa ndị ahụ, dị ka igwe HPLC (chromatography mmiri dị elu), igwe gas chromatography, igwe LC / MS (igwe mmiri chromatography – mass spectrometry), wdg. Ọzọkwa, ndị ọrụ R&D anyị na-arụsi ọrụ ike na mmiri ahụ na nyocha teknụzụ ma na-ekwenye, gụnyere nkewa adịghị ọcha, nyocha, nsuso, wdg.
–80 Celsius C, 10 Liter arịa arịa (R&D)
–80 Celsius C, 500Liter arịa maka kilogram rụpụta na Tech mma
-80 Celsius C, 2000Liter Bulk iji rụpụta ya
Ogwe 100, 100mL ~ 1L Nnyocha ụgbọ mmiri & R&D）
Ogwe 100, 20L ~ 50L Ngwongwo kilogram rụpụta na Tech ka mma
Ogwe 100, 1000L ~ 5000L Vessel Bulk iji rụpụta ya